Global Voices teny Malagasy » Indonezia, mampiroborobo ny bilaogy tsara, imailaka feno fankahalàna ary ny Lokan’ny Biloagy Azia Blog Awards …………………. Fampitomboan’i Indonezia An’ireo Blaogy Tsara, Ireo Imailaka Mifono Fankahalàna Ary Ireo Blaogy Fanolorana An’i Azia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2019 11:55 GMT 1	 · Mpanoratra A. Fatih Syuhud Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2006)
Tao anatin'ireo taona roa farany, vavolombelon'ny firoboroboana tsy mitsahatra sy mahavelom-panantenan”ireo blaogy tsara sy ireo blaogera malaza mila amporisihana ny tontolombolongana Indoneziana. Ny anton'io, amin'ny ankamaroany, dia nohon'ny fitobak'ireo manampahaizana, mpanoratra ary mpanao gazety Indoneziana izay manomboka mampiseho ny fahalinan-dry zareo amin'ny blaogy. Manana blaogera tsara vitsivitsy naseho tao anatin'ny blaogera Indoneziana tamin'ity herinandro ity  aho.
Isan'ny antony hafa izay nahasarika azy ireo hanao blaogy koa dia ny (a) demokrasia amin'ny ampahany manontolo misy fahalalahana maneho hevitra izay mifamatotra aminy ary miaraka amin'izay (b) ny toerana voafetra sy ny fanapahankevitra manana fironana sy indraindray mitanila eny amin'ireo ampahan'ny media ho an'ny daholobe rhefa mamoaka matoan-dahatsoratra iray heverina ho singa mandray anjara amin'ny fitomboan'ny fahalinan-dry zareo hanao bilaogy. Mazava ho azy, tsy azo odian-tsy hita koa ny fisarihana ateraky ny fanatontoloana.
Na eo aza anefa ny fahalalahana feno izay sitrahantsika, tsy avy amin'ny governemanta ny karazana iray hafa amin'ny “faneriterena ny fahalalahana”. Fa tsy izany, fa avy amin'ny tsirairay na fikambanana mpikatroka izay mahatsiaro “tezitry” ny tsikeran'ireo blaogera sasantsasany izy io.
Yosef Ardi  , ohatra, izay niblaogy tsy tapaka mikasika an'ireo indoneziana manankarena sy manana ny maha-izy azy manokana (VIPs), dia nanambara tao anaty blaogin'i Enda  indra mandeha fa naharay “fitarainana” avy amin'ireo vondron'orinasa telo noho ireo lahatsoratra navoakany.
Raha niteny taminay  i Indonesia Anonymus , sady mpanao gazety toa an'i Yosef Ardi ihany koa, fa vao avy naharay imailaka 127 mifono fankahàna izy , misy adiresy sy votoaty samihafa, nefa inoany fa avy amina olona iray ihany izy ireo na fikambanana iray ihany, raha ny fahitàna azy dia avy amina mpikambana iray anatina fikambanana mpikatroka. Naveriny nalefa ireo imailka feno fankahalàna taorian'ny nandikàny azy tamin'ny teny anglisy. Marobe ireo fanehoankevitra maneho fangorahana sy fanohanana tamin'ilay “lahatsorarany imailaka feno fankahàna“. Indreto ny sasantsasany tamin'izany.
Hoy ny mpaneho hevitra iray tsy nitonona anarana :
Tohizo ny fanaovana blaogy, aza miraharaha an'ireo imailaka feno fankahalàna ireo mihitsy. Ilaintsika aseho an'izao tontolo izao fa isika, Indoneziana, dia tsy mpiziriziry fotsiny amin-kevitra. Efa nekena ho toy ny vahoaka misokatra ara-tsaina isika. Noho izany, ndeha ho porofointsika amin'izao tontolo izao izany. Ho an'izay na ireo olona nandefa an'ireo imailaka feno fankahàna ireo, henatra ho anareo ny manandrana mampiditra amboletra ny hevitrareo amin'ireo olona hafa. Mba tsy handaniana hery be loatra amin'ireo olana tsy dia ilaina, nahoana isika no tsy miaraka mifantoka amin'izay hiadiana amin'ny fahantrana mitombo be eto Indonezia?
Niteny i Andry hoe:
Izao e, raha ny làlana efa nodiaviko, efa fantatrareo hatrany am-piandohana hoe hatraiza no mampidi-doza ny fanaovana blaogy. Na eo aza ireo “fteninareo mamelovelo” , tiako ny mahay zavatra iray na roa amin'io blaogy io satria manana hazondamosina ianareo. Tsy hitondra antsika mankaiza ny fanoratana ho an'ny filàn'ny daholobe – amin'ny fanomezana fahafahampo ny rehetra – saingy ny fanoratana ny hevitsika (misy fikasana madio, mahatoky anareo aho) dia miteraka adihevitra nefa miafara amin'ny fiforonan'ny fitokian'ny olona rehefa mandeha ny fotoana.
Mizotra mankamin'ny Havanana kokoa ve ny politika Indoneziana?
Martin Manurung, iray amin'ireo blaogera vaovao hendry vao nipongatra, no manasongadina ny firehana ankehitriny amin'ny politika Indoneziana izay, heveriny fa mirona kokoa miankavanana (vakio, ny fifikiran'ny finoana amin'ny nentindrazana) . Tohanany amin'ny tabilao maneho ireo vokatry ny fifidianana tamin'ny taona 2004 ny fanadihadiany, mifototra amin'ireo ideolojian'antoko politika, izay hanome ho an'ireo mpamaky azy sary iray mazava kokoa mikasika ny fironana ankehitriny eo amin'ny lafiny ara-politika ao Indonezia. Izy, sy isika rehetra koa, dia miahiahy mazava ho azy raha toa mitombo ny fironana ara-politika ankehitriny ao Indonezia, manokana amin'izany ny lafiny eo amin'ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra raha toa ka mifidy ho an'ireo antoko ankavanana ireo Indoneziana mandritra ireo fifidianana solombavambahoaka sy ireo fifidianana isam-paritra ho avy.
Lokan'ny Blaogy ao Azia: Indonezia (Asia Blog Awards Indonesia)
Eny, miaraka amin'ireo fitomboana tsara sy ireo blaogy tsara kalitao, heveriko fa i Jakartass , izay sahirana ankehitriny amin'ny maha mpitsara azy ao anatin'ny Asia Blog Awards Indonesia dia hihetsi-po mahita ilay bilaogy tsara kalitao mihamitombo ary, miaraka amin'izay, sahiran-tsaina hifantina iray avy amin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/22/138478/
 blaogera Indoneziana tamin'ity herinandro ity: http://del.icio.us/weblogz/blogger-of-week
 Yosef Ardi: http://yosef-ardi.blogspot.com
 niteny taminay: http://indonesia-anonymus.blogspot.com/2006/06/127-hatemails.html
 Indonesia Anonymus: http://indonesia-anonymus.blogspot.com
 politika Indoneziana izay, heveriny fa mirona kokoa miankavanana (vakio, ny fifikiran'ny finoana amin'ny nentindrazana): http://martinmanurung.blogspot.com/2006/06/is-indonesia-going-more-to-right.html